KEDU IHE KACHA MMA TORRENT MA Ọ BỤ MEDIA GETH - UTORRENT - 2019
Ndị na-emepụta Smartphones Xiaomi nwetara mmelite n'ihi ezigbo nhazi "ọnụahịa-mma", yana usoro nhazi ngwa ngwa maka ntanetị nke ndị ọzọ. A na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ ikpeazụ n'iji PC, nke ị ga-achọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ. Ọzọ, anyị ga-eweta usoro ịwụnye ngwanrọ ọrụ maka Xiaomi Redmi 3.
Na-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala maka Xiaomi Redmi 3
Enwere usoro ntinye software nke gadget na ajụjụ. Onye ọ bụla n'ime ha nwere uru na ọghọm, nke anyị ga-egosi.
Usoro 1: Xiaomi MiFlash
Maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị na-arụ ọrụ nke ngwa ngwa, Xiaomi wepụtara ikikere MiFlash, nke a na-arụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na usoro.
Mgbe nbudata ahụ zuru ezu, mepee onye nhazi ahụ site na ịpị abụọ. Na windo mbụ Wizards Wụnye pịa na "Na-esote".
Na-esote, ịkwesịrị ịtọ ọnọdụ nke ihe onwunwe bara uru. Site na ndabara, ndekọ a họọrọ na sistemụ ngwa - maka ihe mgbaru ọsọ anyị ugbu a bụ nhọrọ kasị mma, yabụ hapụ ya dị ka ọ bụ ma pịa "Na-esote".
Jiri bọtịnụ ahụ ọzọ. "Na-esote" ịmalite ịwụnye anụ.
Biko mara na windo nwere ike ịdọ gị aka ná ntị maka ihe ize ndụ nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi. Ịga n'ihu, ị ga-achọ ịhọrọ "Wụnye ọkwọ ụgbọala a agbanyeghị".
Mechie onye nchịkọta na njedebe nke nwụnye ma mee ihe omume ahụ site na ụzọ mkpirisi na "Desktọpụ". Mgbe ahụ jikọọ smartphone na kọmputa - a ga-arụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. Ọ bụrụ na nrụnye nke akụrụngwa a ezighị ezi, jiri ihe menu "Ọkwọ ụgbọala".
Na windo na-esote, nyochaa ndepụta nke ihe ị ga-arụ ma pịa "Reinstall".
Na nyocha a nke usoro a agwụla. Mmetụta dị iche iche nke iji MiFlash bụ doro anya - asụsụ Russian na-efu, arụ ọrụ na-ejighị n'aka na nsụgharị ndị ọhụrụ nke Windows nwekwara ike.
Usoro 2: Ngwaọrụ ngwa ngwa
Ị nwere ike ịmegharị amaokwu ahụ n'ejighi eji ngwanrọ arụ ọrụ, ma ọbụna na nke a, ịnweghị ike ime n'enweghị ọkwọ ụgbọala. Anyị atụlelarịrị ụzọ nke ịkwado ọrụ ọrụ maka ngwaọrụ arụmọrụ, ya mere gụọ ihe ndị na-esonụ.
Ihe nkuzi: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ arụmọrụ
Usoro 3: Ụlọ ọrụ nke atọ
Arụmọrụ nke mmemme flash Xiaomi nwere ike bụrụ nke ọhụụ maka ụfọdụ ndị ọrụ, na ịwụnye ya maka naanị ndị ọkwọ ụgbọala na-adịghị mma. Nhọrọ ọzọ na Miflesch ga-enwe ọtụtụ nwelite ngwa ndị nwere ike iṅomi usoro mmiri ma melite ngwanrọ maka ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Anyị enyochala ihe omume kachasị na klas a, ya mere anyị na-adụ gị ọdụ ịgụ isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Software maka imelite ndị ọkwọ ụgbọala
Okwesiri iburu n'obi na n'ime ihe ngwangwa nke ngwanro maka igwe, ma karia onye dike nke isiokwu anyi, adighi. Nhọrọ kachasị ịtụkwasị obi nke mmemme ndị a bụ DriverMax dị ka onye nwe nchekwa data kachasị. Ntuziaka maka ịrụ ọrụ na ngwa ahụ dị na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ihe nkuzi: Nwelite ugbua site na DriverMax
Iji dozie nsogbu anyị taa, ị nwere ike ime na-enweghị wụnye ngwanrọ nke atọ - naanị jiri ID ngwaike, nke maka Xiaomi Redmi 3 yiri nke a:
USB VID_2717 & PID_F00F & MI_03
Ịkwesịrị ịbanye njirimara a na akụ dịka DevID ma nye ndị ọzọ ọrụ, nke ga-achọta ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị ma nye ha ibudata ha. Enwere ike ịchọta nduzi zuru ezu maka iji usoro a mee ihe n'okpuru.
Ihe Ọmụmụ: Na-emelite Ọkwọ ụgbọala na ID
Usoro 5: Ngwaọrụ System
Usoro kachasị ọhụrụ maka taa bụ iji ngwá ọrụ Windows batrị - "Onye njikwa ngwaọrụ"Na nke ọrụ ọrụ ọkwọ ụgbọala dị maka ngwanrọ a ghọtara.
Usoro a dị mfe, ọ na-ewe naanị nkeji ole na ole, ma ọ bụrụ na nsogbu, anyị na-adụ gị ọdụ ịgụ akwụkwọ ntuziaka ndị a.
Gụkwuo: Na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na "Njikwa Ngwaọrụ"
Anyị atụlewo ụzọ ndị bụ isi iji budata ndị ọkwọ ụgbọala maka Xiaomi Redmi 3. Nzọụkwụ ndị akọwapụtara na ntụziaka dị mfe igosipụta, ọbụnadị onye ọrụ novice nwere ike ijikwa ha.